Notsapainay ny sofina audiomax HB-8A Bluetooth | Vaovao IPhone
Notsapainay ny sofina audiomax HB-8A Bluetooth
Rehefa mitady headset an-tsofina miaraka amin'ny fifandraisana Bluetooth isika dia mirongatra hatrany ny vidiny. Ireo marika malaza dia mampiakatra be ny vidin'ny vokatra miaraka amin'ireo toetra ireo, na dia tsara aza, mihamaro ny safidy hafa miseho eny an-tsena toy ny audiomax HB-8A headphones.
Tsy mbola naheno an'ity marika ity angamba ianao fa ny marina dia ny vokatr'izy ireo mahazo hevitra tsara ka tsy misy tsara noho ny fitsapana azy ireo haka ny fehin-tsika manokana.
1 Unboxing audiomax HB-8A
5 Ny antsipiriany hafa
Unboxing audiomax HB-8A
Ny fonosana an-tsarimihetsika audiomax HB-8A dia tsotra na dia ao anatiny aza ho hitanay izay rehetra ilainao mba hahazoana tombony betsaka amin'ireo fiarovan-doha ireo:
Audiomax HB-4.0A Bluetooth 8 Headphones
Tariby famandrihana MicroUSB
Tariby fanampiny miorina amin'ny jack 3,5 mm
Antsipiriany iray izay ampidirina ny fonony satria noho io dia azontsika atao ny mitahiry azy ireo soa aman-tsara ary misoroka azy ireo tsy ho vovoka, ho maratra sns.
Ireo headphone an-tsofina ireo dia manilika ny lokon'ny ankehitriny ary miloka amin'ny a endrika kanto sy kanto, fampifangaroana aliminioma voalamina amin'ny pad mainty milomano, zavatra izay hankasitrahantsika rehefa mandany ora maromaro amin'izy ireo eo an-dohanay.
Eny, ny audiomax HB-8A mahazo aina be ry zareo. Ny fehiloha dia tsy manery ny lohantsika na dia mitazona tsara aza izy. Ny pads dia manangona tsara ny sofintsika iray manontolo ary manolotra isan-jato ny fitokanana amin'ny tabataba any ivelany (tsy misy teknolojia fanafoanana ny tabataba).
Raha te hitahiry headphones dia afaka isika aforeto anaty tanany izy ireo ary ahena ny habaka iasan'izy ireo. Ny mekanisma mivalona dia manaitra ahy ary izy io dia toa clack mafy be toy ny hoe ny takelaka plastika manasaraka ny toerana mivalona amin'ny mahazatra. Ny kalitaon'ny fananganana dia tsara ka antenaina fa tsy hisy olana amin'ny ho avy ny rafitra.
Tena tsy sahy nampiasa foana aho Bluetooth amin'ny fihainoana mozika. Ny fahaverezan'ny kalitao dia miharihary eo alohan'ilay audio jack na fifandraisana misy tariby hafa, izay tsy manadino ireo fitsabahana mety hitranga rehefa mivoaka ny elanelam-potoana fonosin'ity fifandraisana ity isika (10 metatra ambony indrindra).
Ny audiomax HB-8A dia nahagaga ahy raha ny kalitaon'ny feo no resahina. Sahiran-tsaina aho amin'ny headphones ary vitsy ny maodely tiako, na izany aza manolora feo mandanjalanja eo anelanelan'ny matetika ary tsy misy miavaka ambonin'ireo sisa ireo. Potsitra ny bas na dia tsy misy halaliny aza ary madio ny refy afovoany sy avo, tsy misy fanodikodinana na dia mihifikifi-doha kokoa noho ny mahazatra aza isika.
Mampanantena ny mpanamboatra ireny fiarovan-doha Bluetooth a mizaka tena hatramin'ny 19 ora ary manao izany izy, mijoro amin'ny sandam-bola mihoatra ny salanisa mahazatra. Ny fananana karazana an-tsofina dia nahafahantsika nampiditra bateria misy refy malala-tanana ary raha ampiantsika amin'izany ny fihenan'ny protokol Bluetooth 4.0 dia azontsika ity fiainana bateria mahavariana ity.
Raha te-handoa ny audiomax HB-8A isika dia tsy maintsy mampiasa ny cable microUSB izay tonga fenitra. Raha lany bateria isika, safidy iray hafa hanohizana ny fampiasana azy ireo ny fampiasana azy Jack audio 3,5 mm ary amin'izany dia ho lasa headphone tariby nentin-drazana izy ireo.
Ny antsipiriany hafa
Mba hamaranana amin'ny famakafakana ny audiomax HB-8A, mariho fotsiny fa noho ny fifandraisana Bluetooth dia afaka manao izany isika ampiasao toy ny tsy misy tanana izy ireo.
Amin'ny earphone ankavanana dia misy a bokotra hamaliana antso ary olona roa hafa ahafahantsika mifehy ny habetsaky ny famerenana mozika.
Vidiny 69,99 euro, ny headphone audiomax hb-8a safidy tena soso-kevitra izy ireo Raha ny tadiavinao dia ny fihainoana mozika tsy misy tariby, miaraka amin'ny kalitaon'ny feo voalanjalanja ary amin'ny fiononana lehibe indrindra azo atao, dia tsy avelanao ho foana ny poketranao. Nandresy lahatra ahy izy ireo ary mazava ho azy fa dingana ambony noho ny headphones lafo vidy kokoa izy ireo fa avy amin'ny marika malaza.
Famerenana ny: Nacho
Mekanisme mivalona manatsara kalitao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Notsapainay ny sofina audiomax HB-8A Bluetooth
Ahoana ny fomba hikirakirana ny fikirana ho an'ny iPhone any Espana
Hidina ve ny vidin'ny iPhone 6 rehefa mivoaka ny iPhone 6s?